စုဆောင်းမှု အသက်အာမခံ Archives - CB Life Insurance
တမူထူးခြားသည့် စုဆောင်းမှု အသက်အာမခံ
တစ်လုံးတည်းပေး ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ
အသေးစားကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှု အသက်အာမခံ (စိတ်ချလိုက်ဖ်)
နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံမှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များက အဘယ်နည်း။
(က) ဝင်ငွေခွန်သက်သာခြင်း (Tax Deductible)
(င) အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်း(ပေါ်လစီရှင်က ပေါ်လစီကို နှစ်မစေ့ခင် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့် ခံစားခွင့်)
(စ) ပေါ်လစီကိုစာရင်းပိတ်ခြင်း (ပေါ်လစီရှင်ကအတည်ဖြစ်ပြီးသောပေါ်လစီတွင် ပရီမီယံဆက်လက် မပေးသွင်းနိုင် လျှင် စာရင်းပိတ်နိုင်သည်။ ပေါ်လစီသက်တမ်း စေ့ရောက်သည့်အခါမှသာ စာရင်းပိတ်တန်ဖိုးကို ထုတ်ပေးသည်။)
ပေါ်လစီ(အာမခံသက်တမ်း)မှာ ၅နှစ်၊ ၇နှစ်၊ ၁၀နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံထားငွေအရသော်လည်းကောင်း၊ အသက်အရသော်လည်းကောင်း လိုအပ်ပါက အာမခံထားသူသည် ဆေးစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံပေါ်လစီမှ ထာ၀စဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်မှု အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံ၍ မရနိုင်သော အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံ၍ မရနိုင်သောအချက်များမှာ –
(က) ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဒဏ်ရာရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
(ခ) အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း
(ဂ) မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ခြင်း
(ဃ) ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသော ဆေးဝါးများကိုမှီဝဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်း
(င) မိမိကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ထာ၀စဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်
(စ) ဖော်ပြရန် ထိန်ချန်ခဲ့သောရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် ပေါ်လစီစတင်ခဲ့သည့် သက်တမ်း တစ်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ခြင်း
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် ထာ၀စဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပဲ ပေးသွင်းပြီးသော ပရီမီယံများကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးပါမည်။
အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၄) နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့် မည်မျှရရှိနိုင်ပါသလဲ။
အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၄) နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက အာမခံကုမ္ပဏီမှ ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၄င်းပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံ စုစုပေါင်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (၂%)ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူအား ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (၃ %)
ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (၂ %)
ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (၁ %)
မည်သည့် အာမခံသက်တမ်းတွင်မဆို အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ်ကျော်သည့်အချိန်တွင် သေဆုံးခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအား အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။
အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၄) နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်ကျော် ကာလ၌ သေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့် မည်မျှရရှိနိုင်ပါသလဲ။
အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၄) နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော် ကာလ၌ သေဆုံးပါက ကုမ္ပဏီသည် အာမခံထားငွေအပေါ်မှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ အာမခံထားသူအား အကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံထားငွေ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အာမခံသက်တမ်း (၄) နှစ်အတွက် ဝယ်ယူထားသည့် အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက မည်သည်အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသနည်း။
စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံကြေး = အာမခံထားငွေ၏ ၈၃ %
= ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် x ၈၃ %
= ၈,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
အကျိုးခံစားခွင့် = စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီးသည့်ပရီမီယံကြေး + စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံကြေး အပေါ် အတိုးနှုန်း (၂ %)
= ၈,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် + (၈,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် x အတိုးနှုန်း (၂ %) )
= ၈,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် + ၁၆၆,၀၀၀ ကျပ်
= ၈,၄၆၆,၀၀၀ ကျပ်
အာမခံသက်တမ်း (၃) နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း
၁၈ – ၄၀
၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
၇,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၇,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
၄၁ – ၅၀
၇,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
၅၁ – ၆၀
၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
အာမခံသက်တမ်း (၄) နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း
၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
၇,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ – ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ
အာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း
အာမခံထားငွေ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်အတွက် အာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ် ဝယ်ယူထားသည့် အသက် (၃၅) နှစ် အရွယ်ရှိ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက မည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့် = အာမခံထားငွေ၏ ၁၀၀ %
= ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ကူပွန်များကို သင် စာရင်းဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်မှ နှစ်စဉ်အလိုအလျောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းလျော့ချမှုသည် ကူပွန်အား မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
အတိုးနှုန်းကျဆင်းမှုသည် ကူပွန်အား မည်သို့မျှအကျိုးသက်ရောက်ခြင်း မရှိပါ။ ကူပွန်သည် ပေါ်လစီသက်တမ်း စေ့ရောက်သည့်အခါ အာမခံထားရှိခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အာမခံပေးသည့် ဂုဏ်ပြုမှုတစ်ရပ် အနေဖြင့် ဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်၍ အတိုးနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့် မည်သို့မျှမသက်ဆိုင်ပါ။
အကယ်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ရလျှင် ဤအသက်အာမခံအမျိုးအစား တမူထူးခြားသည့် စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ Smart Savings (5/2) မှ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံ၍ ရနိုင်ပါသလား။
ဤ စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ Smart Savings (5/2) သည် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် မတော်တဆမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုသာ ပေးသော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးသွေးကြောရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Heart Attack ကြောင့် သေဆုံးသွားပါက ဤ စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ Smart Savings (5/2) မှ အကာအကွယ်ရနိုင်ပါမည်လား။
နှလုံးသွေးကြောရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ကာ နှလုံးတစ်ရှုးသေသွားခြင်း Heart Attack ကြောင့် သေဆုံးသွားပါက အကာအကွယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
စာသင်သားအသက်အာမခံဝယ်ယူပြီး ၁ နှစ်ကျော်အကြာတွင် ပေါ်လစီရှင်၌ အကယ်၍ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် မည်သို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသနည်း။
(က) အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံဝယ်ယူသူ မိခင်/ဖခင် သေဆုံးပါက ကျန်ရှိသော ပရီမီယံကို ဆက်လက်၍ ပေးသွင်းရန်မလိုဘဲ စာသင်သားအသက်အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ်(၁၇)နှစ်မှစ၍ အရစ်ကျရရှိခံစားနိုင်သည်။
(ခ) အကျိုးခံစားခွင့်ကို အသက် (၁၇)နှစ်ပြည့်ချိန်မှစ၍ အသက်(၂၀)ပြည့်သည်အထိ (၄)နှစ် အရစ်ကျ ခံစားနိုင် ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် စာသင်သားအသက်အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်ကို တစ်ကြိမ်တည်းမပေးရပါသနည်း။
သားသမီးများ၏ ပညာသင်ကျောင်းနေစရိတ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရည်မှန်းချက်ပြည့်သည့် ဘွဲ့ရချိန်အထိ ငွေကြေးကိစ္စ မပူပင်ရအောင် (၄)နှစ်ဆက်တိုက် တစ်ကြိမ်တည်း ထုတ်ပေးမည့် အစား အရစ်ကျထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အာမခံထားငွေ = ကျပ် ၈,၀၀၀,၀၀၀
အာမခံထားသူရင်သွေးငယ် = ၉ နှစ်
အာမခံထားရမည့်သက်တမ်း = ၁၁ နှစ်
ပရီမီယံပေးသွင်းရမည့်ကာလ = ၈ နှစ်
ပညာသင်ထောက်ပံ့သည့်အကျိုးခံစားခွင့် = ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၁၇)နှစ်
= ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၁၈)နှစ်
= ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၁၉)နှစ်
= ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၂၀)နှစ်
ပညာရေးအသက်အာမခံပေါ်လစီဝယ်ယူအပြီး ၁နှစ်ကျော်အကြာတွင် ပေါ်လစီရှင်တွင် အကယ်၍ အကြောင်း တစ်စုံ တစ်ရာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသနည်း။
၁ နှစ်ကျော်လွန်ပြီးအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် သေဆုံးခဲ့လျှင် “သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်” အား ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ပရီမီယံမျှ ထပ်မံပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်း ပရီမီယံကြေး ပေးသွင်း ရမည့် ရက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ပရီမီယံကြေးပေးသွင်း ကာလ ပြီးဆုံးချိန်အထိ ပေါ်လစီရှင်မှ အာမခံကုမ္ပဏီ သို့ ပေးသွင်းရန်ရှိသော ပရီမီယံများ အားလုံးကို ပေးသွင်းရန် မလိုတော့ဘဲ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါမည်။ ကင်းလွတ် ခွင့်ပေးထားသည့် ကာလအတွင်း ပေါ်လစီသည် ဆက်လက်တည်မြဲနေပြီး သတ်မှတ်သက်တမ်း ရောက်ရှိ ချိန်တွင် ပညာရေးအကျိုးခံစားခွင့် ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ပညာသင်ကြားရေးအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် ပရီမီယံပေးသွင်းရသည့် သက်တမ်းပြီးဆုံးချိန်မှစ၍ အာမခံ သက်တမ်းစေ့ရောက်သည့်နေ့အပါအဝင် တစ်နှစ်ပြည့်သည့်နေ့သို့ ရောက်တိုင်း အာမခံ ထားငွေ၏ ၂၀%စီကို (၅)နှစ်ဆက်တိုက် အာမခံသက်တမ်းပြီးဆုံးချိန်အထိ ထုတ်ပေးပါမည်။
အဘယ်ကြောင့် ပညာသင်ကြားရေး အကျိုးခံစားခွင့်ကို တစ်ကြိမ်တည်း မထုတ်ပေးရပါသနည်း။
ပညာရေးအသက်အာမခံသည် ပညာသင်ကလေးများ၏ ပညာရေးရပ်ဆိုင်းမသွားစေဘဲ ဆုံးခန်းတိုင် ဘွဲ့ရသည်အထိ ငွေကြေးအခက်အခဲမရှိ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် တစ်ကြိမ်တည်း ထုတ်မပေးဘဲ စာသင်နှစ်အလိုက် ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အာမခံထားငွေ = ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
အာမခံသက်တမ်း = ၁၁ နှစ်
ပရီမီယံပေးရမည့်သက်တမ်း = ၇ နှစ်
ပညာသင်ကြားရေးအကျိုးခံစားခွင့် = ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၇ နှစ်
= ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၈ နှစ်
= ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၉ နှစ်
= ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၁၀ နှစ်
= ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၁၁ နှစ်
စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည်များရှိပါသလား။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အသက်အာမခံနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုသည်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
AddressCreated with Sketch.	သမဝါယမစီးပွားရေးဗဟိုဌာန၊ ဆရာစံပလာဇာ၊ ၅-ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Email AddressCreated with Sketch.	contact@cblife.com.mm
WebsiteCreated with Sketch.	www.cblife.com.mm
© Copyright 2020 All right reserved by CB Life Insurance